Fanendrena praiminisitra : saika mitovitovy fijery ny mpahay lalàna sy ny mpanao politika | NewsMada
Fanendrena praiminisitra : saika mitovitovy fijery ny mpahay lalàna sy ny mpanao politika
Saika mitovitovy fijery ny mpahay lalàna sy mpanao politika ny amin’ny fanendrena ny praiminisitra vaovao, indrindra ny fametraham-pialan’ny teo aloha.
Me Razafinjatovo Willy na Olala: Nilaza ny filohan’ny Repoblika fa voaray ny fametraham-pialana, nefa niteny ny praiminisitra fa tsy nanao fametraham-pialana. Eo amin’ny lafiny lalàna: misy ny fanaovana hosoka sy ny fampiasana hosoka. Amin’izay, misy heloka bevava io zavatra io, satria asam-panjakana fa tsy nataon’ny olon-tsotra. Mbola mipetraka ihany ve ny fahatokisan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao amin’izany fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka izany?
Rasamoelina Harinaivo, filohan’ny DHD Madagasikara: Raha nametra-pialana tokoa ny praiminisitra, tsy namaly izy fa tonga dia nanaiky. Na misy fanovana na fanamboarana ny fitantanam-panjakana, tsy ho tafavoaka. Tsotra ny antony: tsy misy foto-kevitra mazava iarovana ny tombontsoan’ny fiarahamonina ataon’izao fanjakana izao. Ny vahaolana: ny faharavan’ny fitantanam-panjakana manontolo io, ary tsy mahamanetra ny manorina vaovao indray hitantana ny firenena amin’ny alalan’ny fifidianana vaovao.
Joseph Yoland, loholona teo aloha: Tsy olona no vahaolana amin’ity firenena ity. Tokony miala avokoa ireo olona tsy mahita ary tsy te hanova ny rafitra hitantana ny toekarena sy ny vola eto Madagasikara. Tsy ny fanendrena olona no hamaha olana eto, fa ny fametrahana rafitra izay mahomby hitsinjovana ny tombontsoan’i Madagasikara sy ny vahoaka maro anisa. Aleo hatao ny fifidianana mialoha ny fotoana, hamboarina ny lalàmpanorenana ary hampidirina amin’izany ny tetika hitantanana ny toekarena sy ny vola.
Rajaonah Andrianjaka, filohan’ny Otrikafo: Efa tsy ao anatin’ny lalàna intsony ny mpanatanteraka miaraka. Tsy mbola tena mazava hoe misy sonian’ny praiminisitra teo aloha ny fametraham-pialana, efa milaza ny filohan’ny Repoblika hoe nametra-pialana izy. Ivelan’ny lalàna izany ny fitondram-panjakana, fa tsy misy lalàna mifehy. Momba ny praiminisitra vaovao: tsy misy antontan-taratasy ofisialy hoe nanao sonia ny fametraham-pialana ny praiminisitra teo aloha sa tsia. Raha ny ahiahy, misy praiminisitra roa eto Madagasikara.